Maxaa Keena Seegada? Iyo Noocyada Faraha Badan Ay Ragu U Seegaystaan. | Gaaloos.com
Home » galmada » Maxaa Keena Seegada? Iyo Noocyada Faraha Badan Ay Ragu U Seegaystaan.
Ninka rabo inuu siigaysto wuxuu aadi jiray suuqa wuxuu soo gadayaa cad hilib weyn oo aan laf lahayn (hilib jiir) guriga ayuu keensanayaa markaas ayuu mindi soo qaadanayaa kaddib ayuu dhanbalayaa, sida cambarka oo kale u bujinayaa, markaas ayuu geedkiisa gelinayaa, sidaas ayuu ku biya baxayaa, culimo badan waxay dhaheen ninka falkan samaynaya labo shay qalad ah ayuu isku darsaday.
Title: Maxaa Keena Seegada? Iyo Noocyada Faraha Badan Ay Ragu U Seegaystaan.